Isbitaal cusub oo laga dhisi doono Warsheekh-Sawirro – Radio Muqdisho
Isbitaal cusub oo laga dhisi doono Warsheekh-Sawirro
Munaasabadda dhagax dhigga cusbitaalka oo loogu tala galay hooyada & dhallaanka degmada Warsheekh ayaa waxaa ka qeybgalay, maamulka degmada iyo xubno ka socday qaybaha Kala duwan ee bulshada ku nool degmada Warsheekh.
Dhaqaalaha dhismaha cusbitaalka oo ay iska iska kaashanayaan qeybaha bulshada ee ka soo jeedda degmadaasi, ayaa waxaa si wadajir ah u dhagax dhigay, Gud.Degmada Warsheekh Axmed Xuseen Axmed iyo Sh.Qaasim Sh.Cabdi Ow Cumar, oo ah Shiikha Degmada Warsheekh.
Sh Qaasim Qaasim Sh Cabdi, ayaa ugu horeeyntiiba hadalo duco, guubaabo iyo mahadnaq isagu jiray u jeediyay dadkii gacanta ka geeystay Biloowga Dhismaha Cusbitaalka.
Jawaahir Baarqab, oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobalka Banaadir oo kamid ah masuuliyiintii ka qeybgashay xafladda dhagax dhigga ayaa sheegtay in faa’ido weyn uu Cisbitaalku u leeyahay ka warqabka xaaladda caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka degmada.
“Wadada dheer ee aan soo marnay oo gabdhaha marka la qaado ay ku dhimanaayeen oo marna meel la geeyo, Jowhar ama Xamar ay ahayd meesha ugu dhow, Maanta waa alle mahaddii ay Hooyada Soomaaliyeed ee degmada Warsheekh ku nool ay heshay baahidii iyo Xuquuqdii ka maqneyd” ayay tiri Jawaahir.
Gudoomiyaha degmada Warsheekh Axmed Xuseen Shiidka, oo soo gabagabeeyay xafladda dhagax dhigga cusbitaalka, ayaa sheegay in uu maamulka gacan ka geeysan doono hubinta dhaqaalaha la soo aruuriyay si loogu dhammeeystiro Mashruuca dhismaha Cusbitaalka.
“Degmada Warsheekh maanta kadib waxa ay leedahay cisbitaalkii hooyada iyo dhallaanka waxaan rajeneynaa in si dag dag ah ku soo dhamaado dhismaha Cisbitaalka maanta la dhagax dhigay, degmaduna arrintaan si gaar ah ayay ahmiyad ugu leedahay, dhaqaalaha lasoo uruuriyayna waxey ku bixi doonoon sidii loogu talagalay”. Ayuu yiri Mudane Shiidka.
Magaalo Xeebeedka Warsheekh, waxa ay qiyaastii 75Km dhinaca Waqooyi uga beegantahay magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya, Waana dhul Deexeed sidoo kalana dadkeedu dhaqaale ahaan ku tiirsanyahay Dhaqashada Xoolaha nool iyo Kalluumeysiga.
Wasaaradda arimaha gudaha oo raashiin u qeybisay isbitaalo ku yaala Muqdisho
Hay’adda Somali Relief Network of north America oo afurin u sameyn dad danyar ah “SAWIRRO”